'Lubbuu keenyaafi uffata ofirraa qabnu malee homaa qabannee hin baane' - BBC News Afaan Oromoo
Image copyright OBN
Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Iluutti lagi Awaash guutee lolaan halkan tasa waan irra ba'eef lubbuu oolfachuuf qofa arka qullaa baqanne malee manaafi qabeenyi of duukaa baafatanne hin jiru jedhan jirattonni.
Dubartoota reefuu da'aniifi daa'imman dabalatee qe'eerraa baqatanii qorra hamaaf saaxilamaa jiraachuu dabalanii himaniiru.
Bulchiinsi godinicha ammoo har'a deeggarsa helikooptaraan dhiheessuu eegaleera jedha.
Lagni Hawaas jiraattotarra gara galee 3,000 ol qe'ee irraa buqqise
Kibba Itiyoophiyaatti sigigoo lafaa fi lolaan badii qaqqabsiise
Lagni Awaash godinoota keessa qaxaamuru keessaa tokko godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa iluuti.
Aanichatti Jimaata darbe halkan keessaa saatii shan irraa eegaluun lagichi guutee gandoota aanichaa sadii irra dhangala'e.
Itti-gaafatamaan Waajjira Hoggansa Sodaa Balaa Godinichaa Obbo Alamaayyoo Shifarraa BBCtti akka himanitti, lolaan kuni hanga ammaatti gara gandoota afuriitti babal'achaa jiraachuu himan.
Balaa kanaan hanga ammaatti ummanni 7,968 qe'ee isaaniirraa buqqa'anii dahoo keessa qubatanii jiru jedhan.
Midhaan gosa garagaraa hektaara 1,800 ol irratti faca'ee jirus lolaa Kanaan mancaa'eera.
Battala balaan kun qaqaberraa kaasuun bidiruudhaan ummata bishaaniin marfame baraaruun hojjetamaa turuufi yeroo ammaa helikooptara deeggarsa raayyaa ittisa biyyaarraa argameen deeggarsi midhaanii dhihaachuu akka eegales himan.
Mancaatii qabeenyaa gaheen alatti hanga ammaatti miidhaan lubbuurra gahe akka hin jiraannes himaniiru.
Erga dahanii reefu ji'a lama ta'uu kan himan jiraattuun aanaa Iluu aadde Alamii Darribee, lolaa Kanaan uffata uffatanii jiraniifi da'imasaaniitiin qofa bahu himu.
"Halkan saatii shanitti nutti seene. Lubbuu keenyaafi uffata ofirraa qabnu malee homaa qabannee hin baane. Kanuma dhufee bishaan mudhii bira nudarbe argine. Daa'imni kiyya reefuu ji'a lamaa bakka amma jirru kanatti qorraan miidhamaa jirti," jedhu.
Hanga ammaatti deeggarsa qeerroon naannoofi mootummaan taasisaniifin jiraachuu kan himan Aadde Alamiin, wanti dhihaachaa jiru garuu gahaa akka hin taane himan.
"Maasarra midhaan nun jiru mana keenya bakka itti gallu hin qabnu. Ammaaf bakkuma qubannaadha nuuf kennan kana jiraan. Daa'imni tiyya arasiidha kunoo simintoorran raffisa. Bookeenis baayyee nu rakkisaa jira," jechuun rakkoo amma itti jirru dubbatu.
Lagni Awaash kun ammaan durallee lolaadhaan akka isaan miidhu himanis kan baranaa garuu daran hammaatadha jedhan.
Jiraataan aanaa Iluu ganda Jigduu Midaa kan biraa Obbo Mula'ataa Fedhaas maatiisaa waliin bakka qubannaa kana jiarachuu himuuun bakka amma jiran kanatti gargaarsi gahaan dhihaachaa hin jiru jedhe.
Itti-gaafatamaan Waajira Hoggansa Sodaa Balaa godinichaa Obbo Alamaayyoo Shifarraa deeggarsi amma taasifamaa jiru hojii lubbuu baraaruuti jedhu.
Fuula duraaf uummatichaaf wana barbaachisu dhiheessuun gara qe'ee isaaniitti deebisanii qubachiisuun akka hojjetamus himan.
Lolaan laga Awaash kun garuu yeroo ammaa hir'achuu caalaa gara gandoota aanichaa birootti babal'achaa jiraachuu eeran.
Lagni Hawaas guutee ummatarra garagaluun 3000 ol qe'ee irraa buqqise
14 Fuulbana 2017
Dubartiin balaa lolaa uumameen muka maangoo jalatti da'uuf dirqamte
Lolaa biyyoota Afrikaa Bahaatti mudataa jiruuf sababni maali?
Dubartiin Chaayinaa 'turizimii dahumsaan' adabamte
Suuraa fuula gurraacha MM Jastin Tiruudoo bara 2001 ka'an